Angeke banikwe ushwele abakweleta uNSFAS – LIVE Express
Umnyango wezemfundo ephakeme usukuchithile ukuthi kunoshwele noma ukumiswa kokukhokhwa kwemali esuke ibolekwe abafundi kwa-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).
Lo mnyango uthi lokhu kudideka kudalwe ukuthi ezinye zezikweletu ebezikweletwa yilabo abebengabafundi emanyuvesi zemali yokufunda eyakweletwa kusukela ngonyaka ka-2013 kuya ku-2015 ziye zakhokhwa ngokuphelele yi-loan yakwa-NSFAS.
“Lokhu sekuvumele ama-graduate ukuthi athole izitifiketi kanye nama-degree ukuze asizakale ukuthola umsebenzi noma baqhubeke nezifundo zabo, kodwa basadingeka ukuthi bakhokhele u-NSFAS njengokwesivumelwano,” kubeka umnyango wezemfundo.
Kuzokhumbuleka ukuthi u-NSFAS umatasatasa kulezi zinsuku nemikhankaso yokuqoqa imali kulabo abebengabafundi kodwa abangakayikhokhi imali yize noma sebesebenza.
u-NSFAS usanda kuveza ukuthi unezinhlelo zokusebenzisana nohulumeni, izinkampani ezizimele kanye nabaqoqi bentela, u-South African Revenue Service (SARS), ukuze ulandele umkhondo wabasebenzi ababefunda ngemali ka-NSFAS kodwa abangakhokhi.
u-NSFAS uyisikhungo esilekelela abafundi abantula ezezimali zokukhokhela izifundo zabo noma abangakhoni ukuboleka emabhange ngokubaboleka imali siphinde sinikezele ngama-bursary kanti sixhaswa umnyango wezemfundo ephakeme.
Sasingekho isizathu sokuchitha amacala ngoZuma – inkantolo